बट्टाईको अण्डा खानाले के सहयोग गर्ने गर्छ हेरनुहोस फाईदाहारु – Khabar PatrikaNp
बट्टाईको अण्डा खानाले के सहयोग गर्ने गर्छ हेरनुहोस फाईदाहारु
August 27, 2020 176
अण्डालाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ । धेरैजसो पन्छीको अण्डा खाइने भए पनि संसारभर धेरैले खाने अण्डाचाहिँ कुखुराकै हो । यसबाहेक हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच आदिका अण्डा पनि धेरै’ले रुचि पूर्वक खाने गरेका छन् । वन्य पन्छीहरू ढुकुर, कालिज तथा तित्राका अण्डा पनि निकै रुचाइन्छ ।
ती सबैका अण्डामा केही फरक विशेषता हुने भए पनि सामान्यत सबैमा एकै प्रकारको गुण पाउन सकिन्छ ।अण्डा खाँदा हुने फाइदा र बेफाइदाको बारेमा पनि हामी’लाई धेरैले ब’ताउने गर्छन् । तर के तपाईलाई थाहा छ स्वस्थ शरीरका लागि दिनमा कति’वटा अण्डा खानु उचित हुन्छ ? अनि यसलाई कसरी पकाउनु पर्छ ?
स्वास्थ्य वि’शेषज्ञहरू शरीरलाई स्वस्थ राख्न दैनिक अण्डा सेवन गर्न सल्लाह दिने गर्छन् । साथै आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा अण्डाको सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा हुनसक्ने हा’निको बारेमा पनि बताउँछन् ।पोषणतत्वले भरिपूर्ण भएकै कारण चिकित्स’कहरू दिनमा एउटा अण्डा खाने सल्लाह दिने गर्छन् ।
अण्डामा भिटामिन ए, डी, बी तथा बी १२, लूटीन तथा जी’एजेनथीन लगायतका तत्व पाइन्छ । यी तत्व आँखाका लागि निकै फा’इदाजनक मानिन्छ ।अण्डा किन्दा कहिल्यै पनि फु’टेको अण्डा किन्नु हुँदैन । यसमा माटो वा व्या’क्टेरिया छि’र्ने ख’तरा हुन्छ ।
त्यसैले, अण्डालाई फ्रिज’मा छोपेर राख्न विज्ञहरू सल्लाह दिने गर्छन् । अण्डाको सेतो भागलाई बट्टामा बन्द गरेर तीन हप्ता’सम्म फ्रिजमा राख्न सकिन्छ । अण्डा’को भित्री पहेँलो भागलाई भने तीन दिनसम्म मात्र सु’रक्षित राख्न सकिन्छ ।अण्डा ताजा छ कि छैन भन्ने कुरा विभिन्न तरिकाले पत्ता लगायत सकिन्छ ।
एउटा भाँडोमा चिसो पानी लिएर त्यसमा अण्डा’लाई हाल्दा पनि यो कुरा पत्ता लाग्छ । अण्डालाई चिसो पानीमा हाल्दा अण्डा डु’बेमा त्यो ताजा हो भने न’डुबेमा बासी हो । यसमा पनि अहिले बजारमा पाइने बट्टाईको अण्डामा अन्य पंक्षीको अण्डामा भन्दा धेरै पौष्टिक आहार पाइने गरेको छ ।
दम,नि’मोनिया, रुघाखोकी र ग्याष्ट्रिक क’न्ट्रोल गर्न बट्टाईको अण्डाले सहयोग गर्ने प’क्षीं विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तै, सुगर रो’गीलाई र उच्च र’क्तचापलाई पनि यसले घ’टाउने काम गर्छ ।
शरिरमा भएको अनावश्यक ट’क्सिन निकाल्ने, किड्नी, लिभर र ग’लव्लाडरलाई स्वस्थ्य राख्न, हड्डी म’जबुद बनाउन, छालालाई स्वस्थ्य ए’लर्जीबाट जो’गाउन, र’गत शु’द्धिकरण तथा ह’मोग्लोविनको मात्रा बढाउन, शरिरिक वृद्धि तथा स्म’रण श’क्ति बढाउन, रो’गप्रतिधात्मक क्ष’मता वृद्धि गर्न र शरिरमा रहेका चो’टपटक चाँडो नि’को पार्न मद्दत गर्न बट्टाईको अण्डा खानाले सहयोग गर्ने गर्छ । स्वस्थ खबर
Prevविराटनगर महानगर १५ की ४४ वर्षीय काेराेना संक्रमित महिलाकाे मृत्यु
Nextपाटन अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत ६५ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
दुःखद खबर: दक्षिण कोरियामा एक नेपालीको मृ:त्यु……..! RIP
सारा नेपाली लाई खुशीको खबर…..! महात्मा गान्धीको जन्मजयन्तीको अवसरमा भारतद्वारा नेपाललाई ४१ एम्बुलेन्स र ६ बस उपहार प्रदान
संसारकै अनौठो गाउँ, जहाँका सबै महिलाको कपाल ७ फिट भन्दा लामो !
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29368)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27897)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27725)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24428)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (21951)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20773)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15527)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14817)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13526)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13236)
४ वर्ष र डेढ बर्षका छाेराछाेरीकी आमा धान मिर्ने क्रममा मेसिनले च्यापेर मृत्यु,नानीको लागि एक सेयर गरौ
हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता,धन लाभ हुने यी १० संकेत
भारती आमा बन्ने, घरमा आउँदैछ नयाँ बेबी
भनिन्छ नि दिनको शुरुवात राम्रो भो भने दिन नै राम्रो हुन्छ, विहानै यि ५ चिजले दिनेछ राम्रो संकेत
भारत सीमा स्थित मारिएका प्रहरी सहायक निरिक्षक गोबिन्द बिकको उच्च सम्मान सहित अन्त्येष्टि